Ibhulogi-Ububanzi Okugcwele - Tantalum capacitor Ukusabalalisa Kemet AVX
Kwangathi 5, 2017
Circuit Ocean Tshela wena Lapho / kungani (cha) ukusebenzisa Tantalum capacitors. Buhle, nebubi, izindlela
Lapho / kungani (cha) ukusebenzisa Tantalum capacitors. Buhle, nebubi, izindlela Emasontweni ambalwa edlule ngasebenza ngokusebenzisa Altium SMPS design course kusukela FEDEVEL Academy nokuthi iphrojekthi kancane eyangishiya umbuzo kungalungiswanga. Ngandlela-thile ngakwazi khona umqondo kule minyaka embalwa edlule ukuthi tantalum capacitors kumelwe kugwenywe, never azi ngempela kungani. [...]
AVX tantalum capacitor anode ubuchwepheshe
AVX Ukusabalalisa Data: AVX tantalum capacitor Anode Ukukhetha Ukushintsha ama ugesi, umkhuba ezivamile sekhompiyutha nowesifunda digital isetshenziswa ukwehlisa umsindo imvamisa high emsebenzini. Ukuze wenze lokhu, yezingxenye kumele babe ESR ongaphakeme (resistivity), capacitance okusezingeni eliphezulu futhi enokwethenjelwa. AVX tantalum capacitor An anode ngokuba jikelele indawo ephindwe, ikakhulukazi ebusweni [...]
Current ezingu KEMET Tantalum capacitor
Ngokuvamile akunakwa e ugesi, ukucindezeleka kuyinto capacitance zokufakwayo (KEMET tantalum capacitor RMS lamanje). Uma ungenalo baqonde kahle, a wamanje kuzokwenza capacitance (KEMET tantalum capacitor okweqile kanye ukwehluleka ngaphambi kwesikhathi). Ngo Converter impunzi, usebenzisa isilinganiselo ezilandelayo, lamanje ekhishwa (Io) nesibopho umjikelezo (D) ingabalwa kalula RMS: [...]
I capacitor kuyinto babashayeli ezimbili sandwiched phakathi izakhi yisivikelo, efana hamburgers.Capacitor ingenye yezingxenye eyisisekelo kunazo futhi ebaluleke kunazo zikagesi. Capacitance ukukhiqizwa emhlabeni wonkana zikagesi (kanye nenkampani yayo imikhiqizo SMD tantalum capacitors, Resistor, inductor) e ezingaphezu kuka 40%. Empeleni zonke izimpahla ezisebenza ngogesi, ezincane flash disk, ikhamera yedijithali, [...]